को को बन्दैछन् मन्त्री ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
३२ श्रावण २०७७ आइतबार
को को बन्दैछन् मन्त्री ?
१४ फाल्गुन २०७४ ४ मिनेट पाठ
काठमाडौं- मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रम ४ बजेलाई राख्न राष्ट्रपति कार्यालयमा औपचारिक जानकारी गराइसकिएको छ। तर मन्त्रिमण्डलमा को को सहभागी हुँदैछन् भन्ने नाम अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। बिहानमात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेट भएको थियो। दाहालले माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको सूची प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका थिए।
दाहालले बुझाएको सूचीमा रामबहादुर थापालाई गृहमन्त्रीमा सिफारिस गर्दा वर्षमान पुनलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे ओली र दाहालबीच छलफल भएको माओवादी निकट स्रोतले बताएको छ। पुनले आफुलाई गृहमा दावी गर्दै आएका थिए। माओवादीबाट मातृका यादव, विना मगरको नामबारे छलफल भएको छ। यता नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षलाई मिलाउन भन्दै गिरिराजमणी पोखरेललाई अन्तिम समयमा समेटिएको स्रोतको दावी छ। यस्तै अहिलेसम्म मन्त्री नबनेका देवेन्द्र पौडेललाई मन्त्री बनाउन माओवादीमा छलफल भएको छ। पौडेलको नाम हट्दा जनार्दन शर्मालाई पुन: चिठ्ठा परेको स्रोतको दावी छ। दाहालले ओलीलाई बुझाएको नाम बाहिर आएको छैन। माओवादीका सात मन्त्रीले सपथ गर्नेछन्।
एमालेमा यस्तो छ सम्भावना
एमालेमा महासचिव इश्वर पोखरेललाई अर्थको जिम्मेवारी दिने तयारी छ। सचिव प्रदिप ज्ञवालीलाई अर्थमा लैजाने तयारी गरिए पनि पोखरेलले अर्थको दावी नछोडेपछि ज्ञवालीलाई अर्को मन्त्रालयको खोजी गरिएको छ। ज्ञवालीलाई परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको एक नेताले बताए। उता संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ। फोरम सरकारमा आए परराष्ट्र दिने तयारी भएको पनि बालुवाटार स्रोतको भनाई छ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराईको नाम पनि मन्त्री बन्ने सूचीमा छ। उनलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ। भट्टराई एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पनि हुन्। माधव नेपाल खेमाबाट उनलाई ओलीले समेट्न खोजेका छन्। यस्तै पोखराका रविन्द्र अधिकारीलाई भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। भट्टराई र अधिकारी मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहार हुनेछन्। भानुभक्त ढकाल अर्का सम्भावित मन्त्री हुन्। सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा लगायतको नामबारे पनि एमालेमा छलफल भएको छ।
सम्भावित पात्रहरुलाई बधाई तथा शुभकामना आउन थाले पनि आफुहरुले अहिले सम्म औपचारिक जानकारी नपाएको एक नेताले बताए। ‘आफ्नो नामबारे छलफल भए पनि आधिकारिक जानकारी पाएको छैन’, एक एमाले नेताले नागरिकसँग भने, ‘तयारी अवस्थामा बसेका छौं के हुन्छ हेरौ।’
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ १३:२६ सोमबार
को को बन्दैछन् मन्त्री
अमेरिकाले स्वीकार गर्‍याे : रुस नै कोरोना खोप बनाउने विश्वको पहिलो राष्ट्र
'लाेकल रक्सी ब्याण्ड कि ब्राण्ड?'
कालिकोटमा पहिरोले घर पुर्दा एकै परिवारका छ जनाको मृत्यु
गन्तव्य हराएको विद्यार्थी आन्दोलन
भदौ १५ सम्म काठमाडौंमा निषेधाज्ञा जारी
किरात राई विद्यार्थी संघले ‘अनलाइन बक्तृत्वकला’ प्रतियोगिता गर्ने
अन्ततः रुसले कोरोना खोपको उत्पादन सुरु गर्‍याे, यही महिनाकाे अन्तिमबाट लगाउन थालिने
दृष्टिविहिनले पहिचान गर्न सक्ने हजारको नयाँ नोट चल्तीमा
‘वनभोजमा समेत रेडियो बोकेर गइन्थ्यो’
मन्त्रीलाई गिज्याइरहने उनकै गृह जिल्लाको सडक
३१ श्रावण २०७७
थप तीन जनाको मृत्यु, नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघ्यो
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) बाट मृत्यु हुनेको संख्या एक सय नाघेको छ । शनिबार थप ३ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै मृतकको संख्या एक सय नाघेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कपिलवस्तु, पर्सा र धनुषाका १—१ जना गरी थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
बन्दाबन्दीमा स्वदेश फर्कनेमा वाग्मती प्रदेशका बढी
कोभिड–१९ का कारण नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका नागरिक स्वदेश फर्केका छन् । यही साउन ३० गतेसम्म स्वदेश फर्किएका ५१ हजार ४४१ मध्ये १४ हजार २५७ वाग्मती प्रदेशका रहेका कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले जनाएको छ ।
एउटै वडामा १६ जनालाई सर्पले टोकेपछि स्थानीयवासी त्रसित
महोत्तरीमा एउटै वडामा १६ जनालाई विषालु सर्पले टोकेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिका–५ राजपुरमा पाँच घन्टाको अन्तरालमा १६ जनालाई सर्पले टोकेपछि स्थानीवासी त्रसित भएका हुन्। धानखेतमा काम गरिरहेका बेला बिहीबार ४५ वर्षीया जैमुन खातुनलाई विषालु सर्पले टोकेपछि उनको मृत्यु भएको थियो ।
विनोद नेपालका पाँच मुक्तक
मौकामा नफुट्ने हीराको के काम, मौकामा नजुट्ने आफन्त के काम।